မြန်မာ့ပြည်မြောက်ပိုင်းကထွက် တဲ့ ကမ္ဘာ့အရှားပါးဆုံးကျောက် တစ်ကမ္ဘာလုံး မှာ ၂၆ လုံးပဲရှာတွေ့သေးတယ် … – Na Pann San
မြန်မာ့ပြည်မြောက်ပိုင်းကထွက် တဲ့ ကမ္ဘာ့အရှားပါးဆုံးကျောက် တစ်ကမ္ဘာလုံး မှာ ၂၆ လုံးပဲရှာတွေ့သေးတယ် …
ကမ္ဘာမှာအရှားဆုံးကျောက်မျက် ရတနာဟာ မြန်မာပြည်ကထွက် တဲ့ ပိန်းနိုက် Painite ပါ။ 2016 ခုနှစ်ကရေးခဲ့တာမို့ အချက်အလက် အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။ memory တက်လာတာတွေ့လို့ ပြန်ရှယ် လိုက်တာပါ ။
ဘာကြောင့်အရှားဆုံးလဲ ဆိုရင် ၁၉၇၉ အထိ တကမ္ဘာလုံးမှာ ၂ လုံးပဲရှိပါသတဲ့။ အခုအထိ ရှားမှန်းသိလို့ ရှာတာတောင်မှ တကမ္ဘာလုံးမှာ ၂၆လုံးပဲရှာတွေ့သေးပါတယ်။
မြန်မာ့ပြည်မြောက်ပိုင်းကထွက် တဲ့ ကမ္ဘာ့အရှားပါးဆုံးကျောက်
ဘယ်ကထွက်သလဲဆိုရင် မြန်မာပြည်ကပဲ ထွက်တယ် လို့ ယူဆထား ပါတယ် ။
ဘာကြောင့် ပိန်းနိုက်လို့ခေါ်သလဲ ။ မစ္စတာပိန်း A.C.D. Pain ဟာ မြန်မာပြည်က ဝယ်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၄ မှာ British Museum ကိုလှုတော့ မှ ကမ္ဘာ မှာ အရှားဆုံးကျောက် အဖြစ် စသိပြီး Painite လို့ Mr. Pain ကိုဂုဏ်ပြုခေါ် တာ ပါ ။
ပိန်းနိုက် တခုခြင်းရာဇဝင်ပြောရင်ရှည် မှာ စိုးလို့ အနည်း အကျဉ်း ပဲပြောပါရစေ ။
ပိန်းနိုက် ၄ ဟာ ၂၀၀၁ မှာတွေ့ပြီး အခု US National Museum, Smithsonian Institute မှာရှိပါတယ်။ ပိန်းနိုက် ၅ က ထိုင်းက ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ ပိန်းနိုက်မှန်းအဖြေထုတ်ပေးတဲ့ အခါ မှာ စတွေ့ပါ တယ် ။ မြန်မာပိုင်ရှင်က မရောင်းပဲမြန်မာပြည်ပြန်ယူသွား ပါတယ် ။ ကျနော်ထင်တာတော့ အန်ကယ်ဂျွန် ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါလို့ ရှားမှန်းသိပြီး သိမ်းထားတယ် ထင်ပါတယ်။
ပိန်းနိုက် ၆ နဲ့ ၇ ဟာ နန်းမြ (နန်းရာဆိပ်) မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းက တွေ့ပါသတဲ့။ ပိန်းနိုက် ၈ နဲ့ ၁၀ ဟာ မိုးကုတ် အုန်းကိုင်းကတွေ့ပါသတဲ့။ ကျန်ပိန်းနိုက်တွေဟာလည်း မိုးကုတ်ပတ်ဝန်းကျင်က တွေ့တာပါတဲ့။
ပိန်းနိုက် ၉ ဟာ ရန်ကုန်မှာ ဂျပန်တယောက်က ဈေးခေါ်ရောင်းတာတွေ့ပြီး အခု ဆွစ်စလန်မှာတဲ့။ ပိန်းနိုက် ၂၅ ဟာ မိုးကုတ်အနောက်ဘက် ကျောက်ပြဿဒ်၊ ဝက်လူးမှော်က ထွက်သတဲ့။ မိုးကုတ်အရှေ့ဘက် သူရိန်တောင်မှာ လည်းတွေ့ရတယ် ဆို ပါတယ် ။
မှတ်သားစရာက ပန်းနိုက်ဟာ လိမ္မော်၊ ပန်းနု၊ အညို စသဖြင့် အရောင်ကွဲပြီးတွေ့ရတယ်တဲ့။ ကျနော်ဟာ မိုးကုတ်ဒေသခံမဟုတ်လို့ အချက်အလက် နေရာ အခေါ်အဝေါ်ကို ပြင်သင့်လျှင် ပြင်ပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ် ပါတယ် ။
ကျနော့ရည်ရွယ်ရင်းက အားလုံး ဗဟုသုတရဖို့ ။ ကမ္ဘာမှာ အရှားဆုံးကျောက်ဟာ မြန်မာက ပဲထွက်တာ သိဖို့ ၊ ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေ တန်ဖိုးကို ဈေးပေါပေါ နဲ့ အချောင်နှိုက်တာ မခံမိကြဖို့ ပါပဲ ။
ယုံကြည်သူတွေကြား မင်းသမီး ဖြစ်လိုက်၊ ဥစ္စာစောင့်ဖြစ်လိုက်၊ သိုက်နန်းရှင်ဖြစ်လိုက်၊ သီလရှင် ဖြစ်လိုက် နဲ့ အမေတော် မြနန်းနွယ် ရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းအမှန်
” နင်းပြားဘ၀ မှ ရုန်းထခြင်း ” ဖတ်ကြည့် ပါ စိတ်ခွန်အားဖြစ် ပါလိမ့်မယ်